ရန်ကုန်စီဂျေ၏ စွန့်စားခန်းများ Archives | Popular
Posts tagged with ‘ရန်ကုန်စီဂျေ၏ စွန့်စားခန်းများ’
''ဟဲ့ကောင် လူ့ဗလာ၊ လေပို လေလျှံတွေသုံးပြီး အဂါရဝစကား မပြောနဲ့၊ ဖွတ်ဘုတ် တီထွင်တဲ့ မတ်ဇူ ကာဘတ် ဆိုတဲ့ ငနဲကလေးကတောင် ဖွတ်ဘုတ်ဟာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုး ကျိုးတွေ ပိုများနေပြီလို့ ဟိုတလော က ရင်ဖွင့်လိုက်ပါပကောလားကွ''…
ဒီမီးက ရာဇဝတ်မှုပါ ဘိုးဘိုးရာ။ အများပြည်သူရဲ့ အိုးအိမ် ဥစ္စာဓနတွေကို မထိခိုက်ပါဘူး။'ဟေ့ကောင်။ ဒီမီးမျိုးက လောကမှာ အဆိုးဆုံးကွ . . .' အဘိုးကြီးက 'ကျား၊ ကျားမီး ယပ်' ဆိုသကဲ့သို့။ တုံးပေကတ်သတ် ဇွတ်ငြင်းနေသဖြင့်…
"စီဂျေ"ဟု အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ် ဂျေ"ဟု အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ် သော လွတ်လပ်သည့် ပြည် သူ့သတင်းသမားတစ်ဦးသည် ပြည် သူတို့ကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အချိန်မရွေး အကျိုးပြုနေတာကိုတော့ ငြင်းမည့် သူမရှိဟု ရန်ကုန်စီဂျေက ဧကန် မလွဲယုံကြည်သည်။ ကြည့်လေ ...
ပြည်သူလူထုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရင်း မိသားစုကို လုပ်ကျွေးပြုစု နေကြတာချင်းတူကြတဲ့ ဘဝတူဆိုတဲ့အသိ ဒရိုင်ဘာတွမှာ မရှိတတ်ကြတာကော ဘာကြောင့်လဲ....။ အများပြည်သူနဲ့ ဆက်ဆံကြရတဲ့ သူတိုင်းစိတ်ရှည်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိမရှိကြတာကော ဘာကြောင့်လဲ...။ စီဂျေသည် ဟိုငေး သည်ငေးနှင့် တက္ကစီအလွတ်ကို မျှော်ရင်း တောင်တွေး…
"ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါ. ပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါ. ..ဆိုပါကလား"ဟု ရန်ကုန်စီ ဂျေသည် ရေရွတ်လိုက်ရာက "ဦး နှောက်ရောင်ရောဂါတောင်မှ ဂျပန်ဆိုတဲ့ ဝိသေသနပုဒ်က ရှေ့က ဦးဆောင်နေသေး၊ အော်...ငါတို့ မြန်မာတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ခေတ် ကတည်းက ဂျပန်နဲ့ မကင်းနိုင်ခဲ့တာ…
အို... ဗုဒ္ဓေါ။ ကိုရီးယား အရူးရောဂါတွေ တစ်ပြည်လုံး ပြန့် ကုန်ပါပေါ့လား။ ဝတ်ပုံစားပုံ၊ ဆံပင် ပုံစံတွေကအစ ကိုရီးယားစတိုင်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ စီးကြတော့လည်း ကိုရီး ယားဘတ်စ်ကားကြီးတွေ..။ ကိုရီး ယားစကားပြော သင်တန်းတွေလည်း အလုပ်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ ကိုရီးယားမှာ…
အော်... ဝိုင်းကျူရှင်တွေမှာမှ ထူးတို့၊ ထူးရှယ်တို့ ရှိတတာ မဟုတ်ဘူး။ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ ဆေးခန်းတွေမှာလည်း ထူးတို့၊ ထူးရှယ်တို့ ရှိတာပဲကိုး။ နောက်ဆို.... ရေဝေးမှာတောင် ထူးတွေ၊ ထူးရှယ်တွေ ရှိလာလိမ့်မယ် မှတ်ပါရဲ့ . .…
ရန်ကုန်စီဂျေ၏ စွန့်စားခန်းများ – ၆
ဘုံကထိန်... ဘုံကထိန် xxx ဘုံကထိန် လှည့်လို့လာ... xxxဘုံကထိန်... ဘုံကထိန် ထထထ ဘုံကထိန် လှည့်လို့လာ...ကထိန်... ဘုံကထိန် xxx ဘုံကထိန် လှည့်လို့လာ... xxxဘုံကထိန်...
“ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီး တော်နွားကျောင်းရသည်” နှင့် တူလှ စွာသော Citizen Journalist ခေါ် လွတ်လပ်သော အရပ်သား သတင်း သမားဘဝတွင် “စီဂျေ” သည် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်စွာ ကျေနပ်ကြည်နူး လျက်ရှိ၏။ FB မှာ…
စီဂျေ( ခေါ်) အကျွန်ုပ်တို့ Citizen Journalist အရပ်သား အလွတ် သတင်းသမားများမှာ... အစား မတော်တစ်လုတ်။ အသွားမတော် တစ်လှမ်းဆိုဘိသကဲ့သို့။ မတော် တဆ၊ ပမာဒလေခ၍ ဖြစ်စေ ...